Mazuva ano, kutanga organic fetiraiza yekugadzira mutsara pasi pehungwaru hwehurongwa hwebhizimusi chairo hunogona kusimudzira kuwaniswa kwefetiraiza isingakuvadze kuvarimi, uye zvakaonekwa kuti mabhenefiti ekushandisa fetereza yemakemikari akapfuura mutengo wegadziriro yemiti yemanyowa, kwete kungoreva mabhenefiti ezveupfumi, asiwo kusanganisira nharaunda uye kugona munharaunda. Kuchinjaorganic manyowa kune organic fetiraiza inogona kubatsira varimi kuwedzera hupenyu hwevhu, kusimudzira mhando yemvura, kusimudzira kugadzirwa kwezvirimwa uye pakupedzisira kuwedzera goho ravo. Zvino ndezve kukosha kwevatengesi uye vagadziri vefotereza kuti vadzidze kugadzira marara mu fetiraiza uye kutanga bhizinesi remanyowa. Pano, YiZheng achakurukura mapoinzi anoda kutariswa kubva kunotevera maficha kana uchitangaOrganic fetiraiza chirimwa.
Nei Uchifanira Kutanga Organic Fertilizer Kugadzira Maitiro?
Organic Fertilizer bhizinesi riri kuita purofiti
Maitikiro epasi rose muindasitiri yefetiraiza anonongedza kune zvakatipoteredza zvakachengeteka uye manyowa mafotereza ayo anowedzera goho rezvirimwa uye anoderedza zvinokanganisa zvinogara kwenguva refu pane zvakatipoteredza, ivhu nemvura. Rimwe divi, zvinonyatso kuzivikanwa fetereza yehunhu sechinhu chakakosha chekurima chine musika wakakura, pamwe nekusimudzira mune zvekurima, zvakanakira fetireza yemakemikari iri kuwedzera kuonekera. Mune maonero aya, zvinobatsira uye zvinokwanisika kune vezvemabhizimusi / vezvemari kutitanga bhizinesi remanyowa.
Mumakore achangopfuura, hurumende dzakapa rutsigiro rwakateerana rwekurima uye organic fetiraiza bhizinesi, kusanganisira mari inotsigirwa, mari yemusika, kuwedzera kugona uye rubatsiro rwemari, zvese izvi zvinogona kukurudzira kushandiswa kwakawanda kwefetiraiza yemanyowa. Semuenzaniso, hurumende yeIndia inopa kukwidziridzwa kwefetireza fetereza kusvika kumaRs. 500 / pahekita, uye kuNigeria, hurumende yakazvipira kutora matanho anodiwa ekusimudzira kushandiswa kwefotereza yevhu kuti ivandudze nharaunda yezvekurima yeNigeria yekugadzira yakasimba mabasa nehupfumi.
Akuzivisa kwekudya kwechikafu
Vanhu vari kuwedzera kuziva nezve kuchengetedzeka uye mhando yechikafu chezuva nezuva. Iko kudiwa kwe organic chikafu kwakakura mumakore gumi apfuura akateedzana. Izvo zvakakosha kuchengetedza chengetedzo yechikafu kuburikidza nekushandisa fetiraiza yekudzivirira sosi yekugadzira uye kudzivirira kusvibiswa kwevhu. Naizvozvo, kuwedzera kwekuziva kwechikafu chemakemikari kunobatsirawo mukuvandudza indasitiri yekugadzira manyowa.
Pzvinhu zvakawandisa zvigadzirwa zve organic fetiraiza
Kune makuru mavhoriyamu emarara marara anogadzirwa zuva nezuva pasirese. Statistically, kune anopfuura mabhiriyoni maviri matani emarara pasi rese gore rega. Zvigadzirwa zvekugadzira fetiraiza yemuchadenga zvakawandisa uye zvakawandisa, senge marara ekurima, semashanga, chikafu chesoya, chikafu chekotoni uye masara ehwahwa), zvipfuyo uye manyowa ehuku (senge ndove yemombe, mupfudze wenguruve, ndove yemabhiza uye mupfudze wehuku) , tsvina yekumaindasitiri (senge vinasse, vhiniga, zvisaririra, masara emufarinya nedota renzimbe), marara epamba (semarara ezvekudya kana marara emukicheni) zvichingodaro. Izvo zvinhu zvakawandisa zvigadzirwa izvo zvinoita kuti bhizinesi remanyowa riwedzere kufarirwa uye kubudirira pasirese.
Nzira yekusarudza iyo saiti nzvimbo
Yakarongedzwa Saiti yeOrganic Fertilizer Kudyara
Sarudzo yenzvimbo yenzvimbo ye Organic fetiraiza chirimwa inofanirwa kutevera misimboti:
● Inofanira kunge iri padyo padyo nekupihwa zvigadzirwa zve kugadzirwa kwe organic fetiraiza, Kuvavarira kudzikisa mutengo wekufambisa uye kusvibiswa kwekufambisa.
● Fekitori inofanirwa kuve iri munzvimbo ine zvifambiso zviri nyore kuti kudzikise zvinetswa uye mutengo wekufambisa.
● Chiyero chemuti chinofanira kugutsa chinodikanwa chekugadzirwa kwetekinoroji maitiro uye kurongeka kunonzwisisika uye kusiya nzvimbo yakakodzera yekufambira mberi.
● Gara kure nenzvimbo yekugara kuti usakanganise hupenyu hwevagari nekuti pane hwema kana hwakati wandei hunogadzirwa panguva yekugadzirwa kwefetiraiza kana zvigadzirwa zvekufambisa.
● Inofanirwa kuve iri munzvimbo dzakatetepa, geology yakaoma, tafura yemvura yakadzika uye mweya wakanaka kwazvo. Uye zvakare, inofanirwa kudzivirira nzvimbo dzinowirirwa nemasiraidhi, mafashama kana kupunzika.
● Nzvimbo iyi inofanirwa kuchinjaniswa nemamiriro enzvimbo pamwe nekuchengetedzwa kwenyika. Shandisa zvizere ivhu risina basa kana renje uye haigare kumunda wekurima. Shandisa iyo yekutanga isina kushandiswa nzvimbo zvakanyanya sezvinobvira, uye ipapo unogona kudzikisa mari.
● Organic fetiraiza chirimwa iri nani rectangular. Fekitori nzvimbo inofanirwa kunge ingangoita 10,00-20,000㎡.
● Iyo saiti haigone kuve iri kure kure netambo dzemagetsi kuitira kudzikisa kushandiswa kwesimba uye kudyara mugadziriro yemagetsi. Inofanira kunge iri pedyo nekuwanikwa kwemvura kuitira kuti isangane nezvinodiwa zvekugadzira, mhenyu uye nemvura yemoto.
Muchidimbu, izvo zvekushandisa zvinoda kumisikidza iyo indasitiri, kunyanya manyowa ehuku uye tsvina yemiti, inofanirwa kuwanikwa chaizvo kubva kumusika nzvimbo uye huku mapurazi ehuku padyo padyo nemuti wakarongwa.